Tuesday, 21 May 2019 09:15
ဘာလုပ်ငန်းတွေအတွက် ဂျပန်ယန်းဘီလျံ ၈၀ ကျော်ချေးရန် လွှတ်တော်က ခွင့်ပြုခဲ့တာလဲ???
ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမြို့များတွင် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဂျပန်အစိုးရထံမှ ဂျပန်ယန်း၈၂ဒသမ ၂၇၃ဘီလျံချေးယူရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က မေ၂၀ရက်တွင် သဘောတူလိုက်သည်။
Monday, 20 May 2019 11:25
ရန်ကုန်တိုင်း လှည်းကူးမြို့နယ် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းတွင် တည်ဆောက်မည့် ECO Green City ကို ယခင်စာချုပ်အတိုင်း ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ လုပ်ငန်းများ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းထိန်က ပြောသည်။
Friday, 17 May 2019 16:24
ခေတ်မီတိုးတက်တဲ့ မြို့တော်တစ်ခုဆိုတာ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ တိုက်တာအဆောက်အအုံတွေ၊ လမ်း၊ တံတားတွေရှိရုံနဲ့ ပြည့်စုံပြီလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ကန့်ကွက်မှုမရှိဟု တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြော
ရန်ကုန် မြို့သစ်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ကန့်ကွက်ခြင်းမရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။
မန္တလေးတွင် ဆောင်ရွက်မည့် Mixed Use Development Projectမှာ ဘာတွေဘာဝင်မလဲ???
မန္တလေးမြို့သိပ္ပံလမ်းတွင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများပါဝင်သည့် Mixed - Use Development Project ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းဒေသကြီးလျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး ဦးဇာနည်အောင်က ပြောကြားသည်။
အလုံမြို့နယ်တွင် မြို့ပြပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ကုမ္ပဏီများကို ရွေးချယ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလုံမြို့နယ်ရှိ မြေဧရိယာ ၆ ဒသမ ၉၈၂ ဧကတွင် မြို့ပြပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် Green Urban Ventures Co.,Ltd ကို ရွေးချယ်ထားကြောင်း မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ အသိပေးကြေညာထားပါသည်။
Friday, 26 April 2019 16:34
နောင်ထွက်ရှိလာမယ့် မြို့ သစ်တွေရဲ့အနာဂတ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီအစိုးရသစ် လက်ထက်၌ မြို့သစ်တည်ဆောက်မှုများ တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားများပြားလာကြောင်းနှင့် မြို့သစ်တည်ရာတွင် ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပင် ပါဝင်လာပြီဖြစ်သည်။
စိမ်းလန်းသည့် Smart City ဖြစ်အောင်ဖော်ဆောင်တော့မည့် ရန်ကုန်မြို့တော်
ရန်ကုန်ကို စိမ်းလန်းတဲ့ Smart City ဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
Wednesday, 24 April 2019 13:58
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဇွန်လအတွင်း အပြီးဆောင်ရွက်မည့် ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း ဖော်ဆောင်ရန် မဟာဗျူဟာမြောက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်း (SEA) ကို ၂၀၁၉ ဇွန်လတွင် အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်မည်ဟု ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးကုမ္ပဏီ (NYDC) အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးသိမ်းဝေက ပြောသည်။
HJ U Yar Kut